अन्तराष्ट्रिय Archives - Page 11 of 30 - Saptakoshionline
पूर्वी टर्कीमा भूकम्प, कम्तीमा १८ को मृत्यु
टर्कीमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । ६.८ म्याग्निच्युड मापन गरिएको भूकम्प एलाजिग प्रान्तको सिभ्रिस सहर केन्द्रविन्दु भएर गएको बीबीसीले जनाएको छ । भूकम्प शनिबार बिहान स्थानीय समयअनुसार ८ बजेर ५५ मिनेट जाँदा महसुस भएको हो । भूकम्पको धक्का छिमेकी सिरिया, लेबनान र इरानसम्म महसुस भएको बताइएको छ । भूकम्पबाट टर्कीस्थित भवनहरूमा उत्ति...
‘बाघी–३’मा टाइगरका बुवा ज्याकी पनि देखिने
एजेन्सी– बलिउड एक्सन स्टार टाइगर श्राफ यतिबेला आफ्नो आगामी चलचित्र ‘बाघी–३’ को सुटिङमा व्यस्त छन्। उक्त चलचित्रमा टाइगरका बुवा ज्याकी श्राफ पनि देखिने भएका छन्। बावुछोरा एकसाथ देखिएको यो पहिलो चलचित्र हुनेछ। चलचित्रको निर्माण पक्षले बिहीबार यसबारेमा जानकारी दिँदै ज्याकी अतिथि भूमिकामा देखिने बताएको छ। उनी चलचित्रमा प्रहरी इन्स्पेक्टरको रुपमा टाइगर र रितेश देशमुखका बुवाको भूमिकामा देखि...
काठमाण्डौ । अमेरिकामा बेरोजगारको संख्यामा सामान्य वृद्धि भएको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ। बिहीबार सार्वजनिक विवरणमा बेरोजगार भत्ता लिन आवेदन गर्नेहरु अघिल्लो साताको तुलनामा ६ हजारले बढी भएको उल्लेख छ। जनवरी १८ को अन्त्यमा बेरोजगार भत्ताका लागि आवेदन गर्नेको संख्या दुई लाख ११ हजार पुगेको छ। अमेरिकी श्रम बजारमा बेरोजगारको संख्या सरकारी अनुमान तीन लाखभन्दा मुनि रहेको छ। तथ्यांक विश्लेषणबाट स...
अष्ट्रेलियामा डढेला नियन्त्रणका लागि गएको विमान दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु
एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा डढेला नियन्त्रणका लागि गएको विमान दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बिहिबार डढेलो प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको उक्त विशाल हवाई ट्यान्कर विमान राजधानी क्यानबेराबाट २ घण्टाको दूरीमा रहेको हिमाली क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको हो । पानीको फोहोरा फ्याक्ने उक्त जहाजलाई आगो निभाउनका लागि न्यु साउथ वेल्सको ग्रामीण अग्नि नियन्त्रण सेवाले परिचालन गरेको नर्थ साउ...
कोरोना भाइरसको कारण सिर्जित निमोनियाबाट चिनमा ४४० जना पीडित
बेइजिङ / चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बुधबार नयाँ कोरोना भाइरस (२०१९–कोभ) का कारण सिर्जित निमोनियाबाट ४४० जना पीडित भएको घोषणा गरेका छन् । यो भाइरस मङ्गलबारसम्म चीनका १३ वटा प्रान्तमा देखिएको छ । यस नयाँ भाइरसका कारण हालसम्म नौ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, र मृत्यु हुनेहरु सबै मध्य चीनको हुबेई प्रान्तका रहेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका उपनिर्देशक ली बिनले बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उपनिर्देशक ल...
मृतक आठ पर्यटकको पहिचान खुल्यो (नाम सहित)
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–४ दामनस्थित पानोरमा रिसोर्टमा मृत्यु भएका आठ भारतीय पर्यटकको सनाखत भएको छ । रिसोर्टका कोठामा गएराती बसेका पर्यटकले हिटर बालेर सुतेका कारण निसास्सिएर मृत्यु भएको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले मृत्यु हुनेमा भारत केरलाका ३८ वर्षीय रन्जित कप, ३४ वर्षीय इन्द्र कप, ३७ वर्षीय प्रवीण, ३२ वर्षीया सरिया, ५ वर्षीय अभी, ७...
यि महिलाले ४४ सन्तान जन्माएपछि…….
युगान्डामा एक महिलाले ४४ सन्तान जन्माएपछि थप बच्चा पाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मरियम नाबातान्जी नामक ती महिलालाई स्थानीयहरूले संसारकै सबभन्दा ऊर्वर महिलाको संज्ञा दिएका छन् । उनले चार जुम्ल्याहा, पाँच तिम्ल्याहा र पाँच चम्ल्याहा जन्माएकी छन् । तर युगान्डाका चिकित्सकहरूले उनलाई थप सन्तान जन्माउन निषेध गरेका छन् । १२ वर्षको उमेरमा विवाहका लागि बेचिएकी नाबाताज्नी एकल महिला हुन् । उनले सिलाइबु...
मोदीले नेपालीमा भने– ‘कस्तो छ ?’
राटनगरमा निर्मित इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको संयुक्तरूपमा उद्घाटन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालीमा पनि बोलेका छन् । आफ्नो सम्बोधनको शुरूमा अभिवादनपश्चात मोदीले 'कस्तो छ ?' भने थिए । अन्त्यमा पनि मोदीले नेपालीमै बोले । उनले भने, 'तपाईंहरूलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु । फेरि भेट होला नमस्कार !' इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको भिडियो प्रविधिमार्फत् संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरिएको ...
भाजपाका नयाँ अध्यक्षमा जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमबारदेखि उक्त दलका अध्यक्ष बनेका छन् । उनी अमित शाहलाई विस्थापित गर्दै भाजपाका अध्यक्ष बनेका हुन्।अमित शाह गृहमन्त्री बनेपछि नड्डाले भाजपाको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। नड्डालाई अध्यक्ष पदका लाथि पूर्वअध्यक्षहरु अमित शाह, राजनाथ सिंह र नीतिन गडकरीले प्रस्ताव गरेका थिए। ‍
इन्डोनेसियामा पुल भत्किँदा कम्तीमा सात व्यक्तिको मृत्यु
इन्डोनेसियाको सुमात्रा द्वीपमा एक पुल भत्किँदा कम्तीमा सात व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रकोप व्यवस्थापन निकायले सोमबार जनाएको छ । कावर शहरको भर्खरै मात्र निर्माण भएको सो पुलमा करिब ३० जना विद्यार्थिहरु पुृल पार गर्न लागेको अवस्थामा अकस्मात पुल भत्किएको थियो । मुसलधारे वर्षाका कारण यस पुलमुनिको नदीमा पानीको सतह सामान्य भन्दा माथि रहेको जनाइएको छ । पुल भत्किएपछि सात जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको र तीनजन...